Akụkọ - Ịhụnanya na prosthetics
Ngwere nwere ike imegharị ma ọ tụfuo ọdụ ya, crabs nwere ike ịmalite ma ọ bụrụ na ha nwụsịrị, ma e jiri ya tụnyere anụmanụ ndị a yiri "oge ochie", ụmụ mmadụ enwekwaghị ike ịmaliteghachi n'oge evolushọn. Ikike imegharị akụkụ ụkwụ na ndị okenye fọrọ nke nta ka ọ bụrụ enweghị ihe ọ bụla, ewezuga ụmụ ọhụrụ nwere ike ịmaliteghachi mgbe ha tufuru mkpịsị aka ha. N'ihi ya, ịdịmma ndụ nke ndị na-efunahụ akụkụ ahụ n'ihi ihe mberede ma ọ bụ ọrịa nwere ike imetụta nke ukwuu, na ịchọta ngbanwe nke ndu bụ nhọrọ dị mkpa maka ndị dọkịta iji meziwanye ndụ ndị e bepụ.
N'ihe dị ka n'Ijipt oge ochie, e nweela ihe ndekọ nke akụkụ aka arụrụ arụ. Na Conan Doyle's "Ihe ịrịba ama nke anọ," e nwekwara nkọwa nke onye ogbu mmadụ na-eji aka prosthetic gbuo ndị mmadụ.
Otú ọ dị, prosthetics dị otú ahụ na-enye nkwado dị mfe mana o yighị ka ọ ga-eme ka ahụmihe ndụ onye bepụ ahụ dịkwuo mma. Ezi prosthetics kwesịrị inwe ike izipu akara n'akụkụ abụọ: n'otu aka ahụ, onye ọrịa ahụ nwere ike ịchịkwa prosthetics onwe ya; N'aka nke ọzọ, akụkụ nke prosthetic ga-enwe ike izipu mmetụta na cortex sensọ nke ụbụrụ onye ọrịa, dị ka akụkụ anụ ahụ nke nwere irighiri akwara, na-eme ka ha nwee mmetụta.
Nnyocha ndị gara aga lekwasịrị anya na idepụta koodu ụbụrụ iji mee ka isiokwu (enwe na mmadụ) nwee ike iji uche ha chịkwaa ogwe aka rọbọt. Mana ọ dịkwa mkpa inye prosthetic uche. Usoro yiri ka ọ dị mfe dị ka ịghọta ihe na-agụnye nzaghachi dị mgbagwoju anya, ka anyị na-eji nwayọọ na-edozi ike mkpịsị aka anyị dịka mmetụta aka anyị si dị, ka anyị ghara ịpụpụ ihe ma ọ bụ tuo ha ike. Na mbụ, ndị ọrịa nwere aka prosthetic ga-adabere na anya ha iji chọpụta ike nke ihe. Ọ na-achọ nnukwu nlebara anya na ume iji mee ihe ndị anyị nwere ike ime na ofufe, ma ọbụna mgbe ahụ ha na-agbaji ihe.
N'afọ 2011, Mahadum Duke mere ọtụtụ nyocha na enwe. Ha mere ka enwe jiri uche ha na-emegharị ogwe aka rọbọt iji jide ihe dị iche iche. Ogwe aka mebere ezigara ụbụrụ enwe dị iche iche akara mgbe ọ zutere ihe dị iche iche. Mgbe ọzụzụ gasịrị, enwe nwere ike ịhọpụta otu ihe n'ụzọ ziri ezi wee nweta ụgwọ ọrụ nri. Ọ bụghị nanị na nke a bụ ihe ngosi mmalite nke ohere nke inye prosthetics mmetụta nke aka, ma ọ na-atụkwa aro na enwe nwere ike ijikọ akara ngosi tactile nke ụbụrụ prosthesis zitere na akara njikwa moto nke ụbụrụ na-ezigara na prosthesis, na-enye ihe zuru ezu. nsonazụ nzaghachi site na aka ruo mmetụta iji chịkwaa nhọrọ ogwe aka dabere na mmetụta.
Nnwale ahụ, ọ bụ ezie na ọ dị mma, bụ naanị neurobiological na agụnyeghị akụkụ ụkwụ prosthetic n'ezie. Na ime nke ahụ, ị ​​ga-ejikọta neurobiology na injinịa eletrik. N'ọnwa Jenụwarị na Febụwarị nke afọ a, mahadum abụọ dị na Switzerland na United States bipụtara akwụkwọ n'adabereghị na-eji otu usoro iji tinye prosthetics sensọ na ndị ọrịa na-anwale.
N'ọnwa Febụwarị, ndị ọkà mmụta sayensị na Ecole Polytechnique dị na Lausanne, Switzerland, na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, kọrọ nyocha ha n'akwụkwọ e bipụtara na Science Translational Medicine. Ha nyere isiokwu dị afọ 36, Dennis Aabo S? Rensen, nwere saịtị sensọ 20 n'aka roboti nke na-emepụta mmetụta dị iche iche.
Usoro dum dị mgbagwoju anya. Nke mbụ, ndị dọkịta nọ n'ụlọ ọgwụ Gimili nke Rome kụnyere electrodes n'ime akwara ogwe aka abụọ nke Sorensen, nke etiti na irighiri akwara. Nri akwara ulnar na-achịkwa obere mkpịsị aka, ebe akwara etiti na-ejikwa mkpịsị aka na mkpịsị aka. Mgbe etinyechara electrodes ndị ahụ, ndị dọkịta na-eme ka Sorensen dị n'etiti etiti na irighiri akwara, na-enye ya ihe ọ na-echebeghị kemgbe ogologo oge: o chere na aka ya na-efu efu na-emegharị. Nke pụtara na ọ nweghị ihe dị njọ na sistemụ ụjọ nke Sorensen.
Ndị ọkà mmụta sayensị na Ecol Polytechnique dị na Lausanne wee tinye ihe sensọ na aka rọbọt nke nwere ike izipu akara eletrik dabere na ọnọdụ dị ka nrụgide. N'ikpeazụ, ndị nyocha ahụ jikọtara ogwe aka rọbọt na ogwe aka e gbupụrụ nke Sorensen. Sensọ dị n'aka roboti na-ewere ọnọdụ nke neurons sensọ dị n'aka mmadụ, na electrodes etinyere n'ime irighiri akwara na-anọchi anya irighiri akwara ndị nwere ike ibunye mgbaàmà eletrik na ogwe aka furu efu.
Mgbe ịtọlitechara ma mebie akụrụngwa, ndị nyocha ahụ mere ọtụtụ ule. Iji gbochie ihe ndọpụ uche ndị ọzọ, ha kpuchiri Sorensen, kpuchie ntị ya ma hapụ ya ka o jiri naanị aka rọbọt metụ ya aka. Ha chọpụtara na ọ bụghị naanị na Sorensen nwere ike ikpebi ịdị ike na ọdịdị nke ihe ndị o metụrụ aka, kamakwa ịmata ọdịiche dị n'etiti ihe dị iche iche, dị ka ihe osisi na ákwà. Kedu ihe ọzọ, onye na-emegharị ahụ na ụbụrụ Sorensen na-ahazi nke ọma ma na-anabata ya. N’ihi ya, ọ ga-enwe ike ịgbanwe ike ya ngwa ngwa mgbe ọ na-ewere ihe ma mee ka ọ kwụ ọtọ. "Ọ tụrụ m n'anya n'ihi na na mberede enwere m ike ịhụ ihe m na-echetụbeghị kemgbe afọ itoolu gara aga," Sorensen kwuru na vidiyo nke Ecole Polytechnique dị na Lausanne wepụtara. "Mgbe m buliri ogwe aka m, enwere m ike ịhụ ihe m na-eme kama ikiri ihe m na-eme."
E mere ọmụmụ ihe yiri nke ahụ na Mahadum Case Western Reserve dị na United States. Isiokwu ha bụ Igor Spetic, 48, nke Madison, Ohio. Ọ tụfuru aka nri ya mgbe hama dakwasịrị ya mgbe ọ na-eme akụkụ aluminom maka injin jet.
Usoro nke ndị nyocha Mahadum Case Western Reserve na-eji bụ otu usoro eji na ECOLE Polytechnique dị na Lausanne, nwere otu ọdịiche dị mkpa. Eletrọd e ji mee ihe na Ecole Polytechnique dị na Lausanne mapuru neurons dị na ogwe aka Sorensen n'ime axon; Eletrọd ndị dị na Case Western Reserve University anaghị abanye n'ime neuron, kama ọ gbara ya gburugburu. Nke mbụ nwere ike iwepụta akara ziri ezi karị, na-enye ndị ọrịa mmetụta dị mgbagwoju anya na nke na-enweghị isi.
Ma ime nke a nwere ihe ize ndụ maka ma electrodes na neurons. Ụfọdụ ndị ọkà mmụta sayensị na-echegbu onwe ha na electrodes na-emerụ ahụ nwere ike ịkpata mmetụta na-adịghị ala ala na neurons, nakwa na electrodes agaghị adịte aka. Otú ọ dị, ndị nchọpụta na ụlọ ọrụ abụọ ahụ nwere obi ike na ha nwere ike imeri adịghị ike nke ụzọ ha. Spiderdick na-ewepụtakwa nghọta ziri ezi nke ikewapụ na akwụkwọ aja, bọọlụ owu, na ntutu. Ndị na-eme nchọpụta na Ecole Polytechnique dị na Lausanne kwuru na obi siri ha ike maka ịdịte aka na nkwụsi ike nke electrode ha na-emerụ emerụ, nke dị n'etiti ọnwa itoolu na 12 na oke.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọ dị oke n'oge itinye nyocha a n'ahịa. Na mgbakwunye na ịdịte aka na nchekwa, ịdị mma nke prosthetics sensọ ka ezughị oke. Sorenson na Specdick nọrọ n'ụlọ nyocha mgbe a na-etinye prosthetics. Aka ha, nke nwere ọtụtụ waya na ngwa, adịghị ka ọ dịghị ihe dị ka akụkụ ụkwụ bionic nke akụkọ ifo sayensị. Silvestro Micera, onye prọfesọ na Ecole Polytechnique dị na Lausanne bụ onye na-arụ ọrụ na ọmụmụ ihe ahụ, kwuru na ọ ga-abụ ọtụtụ afọ tupu prosthetics nke mbụ sensọ, nke dị ka ndị nkịtị, nwere ike pụọ na ụlọ nyocha.
"Enwere m obi ụtọ ịhụ ihe ha na-eme. Enwere m olileanya na ọ na-enyere ndị ọzọ aka. Amaara m na sayensị na-ewe ogologo oge. Ọ bụrụ na enweghị m ike iji ya ugbu a, ma onye ọzọ nwere ike, nke ahụ dị mma."
Oge nzipu: Ọgọst-14-2021